कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसँग भेटे पाकिस्तानी आर्म फोर्सका प्रमुखले
पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सका प्रमुख जुबैर मोहम्मद हायातले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको प्रशंसा गर्दै विकास प्रक्रियामा मुलुक अघि बढेकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालयको पुनर्निर्माणका निम्ति २४ अर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयनका अनुसार विद्यालय निर्माणमा सरकारी बजेट कम भएकाले समस्या भएको छ ।
सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने जारको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु (इकोलाई) भेटिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले गरेको अध्ययन/परीक्षणमा करिब ७४ प्रतिशत जारको पानीमा उक्त जीवाणु फेला परेको हो ।
सफल होला त काठमाडौं महानगरको कर अभियान वर्ष ?
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा लक्ष्य राखेको भन्दा एकतिहाइ मात्रै कर असुल्न सफल भयो । ६ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ८२ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जेठ महिनासम्म २ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख ११ हजार असुली भएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गठन भएका दलित, महिला र मुस्लिम आयोग निष्क्रियजस्तै बनेका छन् । तीनवटै आयोग कर्मचारीका भरमा चलिरहेका छन् । पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन ।
मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध ढंगले शुल्क लिने मलेसिया भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई १२ लाख धरौटी लिई छोड्न जिल्ला अदालत, ललितपुरले मंगलबार आदेश जारी गरेको छ ।
चीन भरपर्दाे छिमेकी : ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिमाल वारिपारिको कनेक्टिभिटीलाई बलियो बनाएर दुईपक्षीय सहकार्य अघि बढाउने बताएका छन् । मंगलबार साँझ बेइजिङ पुगेलगत्तै दूतावासले गरेको सम्मान कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
लामो समयको प्रयासपछि पुन: नेपाल–जापान सीधा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
‘संविधान बनाउँदा पार्टी हेर्न भ्याइनँ’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान निर्माण र कार्यान्वयन प्राथमिकतामा परेकाले पार्टीमा ध्यान दिन नसकेको स्विकारेका छन् । हेटौंडामा मंगलबारदेखि सुरु भएको जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले कतिपय विषय ‘अतिरञ्जित र अशोभनीय ढंग’ ले पनि उठ्ने गरेको तर्क गरे ।
राप्रपा एकीकरण प्रयास सुरु
एकीकरणलगत्तै टुक्रिएका राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बीच एकीकरण प्रयास सुरु भएको छ । पार्टी एकीकरणबारे छलफल गर्न गठित वार्ता टोलीको बैठक मंगलबार बसेको छ ।
गाउँ डुल्दै चित्रबहादुर
मुलुकले संघीयता धान्दैन भन्दै फरक मत राख्ने जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी संसद् बाहिरै छन् । फुर्सदिला बनेपछि उनी गृहजिल्ला बागलुङमा संगठन सुदृढीकरण अभियानमा जुटेका छन् ।
बढैयाताल—८ मा एक बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरेकाे अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । ६३ वर्षीय बाबुले १९ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
भारतसँग जोडिएको पूर्वी मोरङको सिक्टी नाकाको दशगजामा बाक्लो वस्ती छ । त्यहाँ नेपाल र भारत छुट्याउने १६० नम्बरको सीमा स्तम्भ वस्तीको बीचमा छ । वस्तीका अधिकांश टहरामा पसल राखिएको छ ।
एक महिलालाई तेजाब छर्किएको अभियोगमा पक्राउ परेका ट्राफिक प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षक रामचन्द्र खनियाँलाई उच्च अदालत हेटौंडाले धरौटीमा रिहा गरेको छ ।
हिउँचितुवा अनुसन्धानको दुई करोड फ्रिज हुँदै
कञ्चनजंघाको खम्बाचेनमा हिउँचितुवा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि विनियोजित सवा दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्नपूर्ण र शे-फोक्सुन्डो भू-परिधीय क्षेत्रमा पनि केन्द्र खोल्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
डा. देवकोटालाई उनकै अस्पतालको प्रा‌ंगणमा अन्तिम श्रद्धासुमन (तस्बिरहरु)
सोमबार निधन भएका प्रख्यात स्नायु शल्यचिकित्सक प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटालाई उनी आफैंले स्थापना गरेको अस्पतालमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइँदै छ । केही समयदेखि पित्त नलीको क्यान्सरबाट पीडित ६५ वर्षीय देवकोटाको उपचारका क्रममा सोमबार साँझ ५.३५ बजे बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा नै निधन भएको थियो ।
प्रख्यात स्नायु शल्यचिकित्सक प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटाको मृत्युको शोकमा मंगलबार उनले अध्ययन गरेको पालुङटार नगरपालिका–४ स्थित अमर ज्योति जनता मावि लुइँटेलको पठनपाठन बन्द गरिएको छ ।
तीन जनाको ज्यान जाने गरी स्कुटरलाई ठक्कर दिने टिपर चालकलाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले पूर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा प्रस्थान गर्नुअघि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीन तर्फ प्रस्थान गरेका छन् । उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महरा लगायत, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सरकारका मन्त्रीहरुलगायतले बिदाई गरेका थिए । उनलाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले विमानस्थलमा सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण- नयाँदिल्ली भन्छ : नो कमेन्ट
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका सम्बन्धमा दिल्लीमा ‘रहस्यमय मौनता’ देखिएको छ । विगतमा ‘नेपाल चीनतिर ढल्कियो, केपी ओली र चीनबीच विशेष सम्बन्ध’ जस्ता शीर्षकलाई प्राथमिकतामा राख्ने भारतीय प्रमुख सञ्चार माध्यमले समेत ओलीको चीन भ्रमणका सम्बन्धमा औपचारिकता मात्र पूरा गरेको देखिन्छ ।
एसआईपीले सुधारिए सामुदायिक विद्यालय
पाँच वर्षअघिसम्म कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१ स्थित जगनाथ आधारभूत विद्यालय नाम मात्रको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सुधार परियोजना (एसआईपी) लागू गरेपछि अहिले सबैले यो विद्यालयको तारिफ गर्न थालेका छन् ।
कक्षा ११ र १२ मा याे वर्ष किन लागू हुन सकेन नयाँ पाठ्यक्रम?
कक्षा ११ र १२ का लागि तयार पारिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम एक वर्ष परीक्षण गरेपछि मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम २०७६ को शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग नेपालको विकास एवं पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग र सहकार्यको प्रस्ताव राख्ने बताएका छन् । ऊर्जा, रेलवे निर्माण र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दुईपक्षीय सम्झौता र समझदारीमै हस्ताक्षर हुने जानकारी ओलीले दिएका छन् ।।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण- थोकमा सहकार्य होस् : विज्ञ
प्रधानमन्त्री केपी ओली ६ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि मंगलबार उत्तरी छिमेक चीन प्रस्थान गर्दैै छन् । उनको यो भ्रमण यसअघिको जस्तो उत्साहजनक नदेखिए पनि चासो भने धेरै क्षेत्रबाट प्रकट भएको छ ।
पीडकलाई सांकेतिक सजायमा ‘सहमति’
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडकलाई ‘सांकेतिक सजाय’ दिएर संक्रमणकालीन न्यायनिरूपण गर्ने गरी कानुन बनाउन राजनीतिक, कूटनीतिकलगायत सबै पक्ष ‘सहमत’ भएका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वर्षमा बढीमा तीन पटक मात्र विदेश भ्रमण गर्न पाउने कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसलाई ‘भ्रमणलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन’ भनेको छ ।
प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणी कटौती: ‘वृत्तिविकास खुम्चियो’
नेपाल प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीका एआईजीको संख्या घटाउनु ठीक थियो कि थिएन भन्ने बहस सुरु भएको छ । साताअघि मन्त्रिपरिषदको बैठकले एआईजी संख्या १६ बाट ३ मा झार्ने निर्णय गरेको हो । विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी कटौतीले संगठनभित्र वृत्ति विकासको अवसर खुम्च्याएको टिप्पणी केही पूर्वप्रहरी अधिकारीले गरेका छन् ।
कर्मचारीकै भरमा भाषा आयोग
भाषा आयोग गठन भएको दुई वर्ष हुन लाग्यो । समयका हिसाबले यो निकै लामो हो । तर आयोगमा न सदस्य नियुक्त गरिएको छ, न कुनै नीतिगत निर्णय नै हुन सकेको छ । सदस्य नियुक्ति नहुँदा आयोगको ५ वर्षे रणनीतिक मार्गचित्र निर्माण हुन सकेको छैन ।